Ikepusi yePlastiki yokutya kwiFactory, ababoneleli - iChina yePlastiki ikepusi yokutya abavelisi
Esi sigqubuthelo sothuli seplastiki sisetyenziswa ikakhulu kukutya okunkonkxiweyo okufana nehagu enkonkxiweyo, intlanzi enkonkxiweyo, inyama yenkomo enkonkxiweyo, njl njl. Inokukhusela umlomo wetoti eluthulini kwaye iwugcine ucocekile.
Esi sigqubuthelo sothuli seplastiki singasetyenziswa kwinyama yesidlo sasemini enkonkxiweyo okanye kwiitoti zokutya ezahlukeneyo, ezinokuthintela uthuli, kungekuphela nje ukwenza imveliso ibonakale ithambile kwaye intle, kodwa icocekile ngakumbi. Umbala unokwenziwa ngokwezifiso.
Le cap yeplastiki yenziwe nge-PS, yomelele kakhulu, ukuze ingabinakonakala.uyilo lwale cap yeplastiki ilula kodwa ithambile kakhulu.Ukusuka kwi-engile ethile, umphezulu wayo uyabengezela kakhulu, ukhangeleka uphakamile, ngaloo ndlela uphucula umgangatho wemveliso yonke yokupakishwa.
Le cap yeplastiki ingasetyenziselwa iphakheji yokutya, njengeziqhamo ezomileyo, ikofu, ubusi, iswekile emdaka, amandongomane, njl.Inkangeleko inokuthengiswa ngokomthengi, kwaye umbala uyafana.Izinto eziluhlaza ze-cap yeplastiki yi-PP yebakala lokutya, ayinancasa kwaye iluhlaza.